मेरियटमा प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालको पेट हेर्दै भने ‘जनै खटिरा हो ? « Gaunbeshi
मेरियटमा प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालको पेट हेर्दै भने ‘जनै खटिरा हो ?
काठमाडौ । लामो सम्बादहिनताका बीच बुधबार साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल वान टु वान वार्तामा बसे । त्यस अघि विभिन्न चरणमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । बुधवार साँझ पनि कार्यदलले वैठकमा भएका प्रगती सुनाएपछि दुई नेता एक्ला एक्लै बसेका थिए । करिब २ घण्टा उनीहरु छलफलमा बसेका थिए ।
तर कुनै निष्कर्ष भने आएन । विवाद सल्ट्याउन भन्दै कार्यदलको पहलमा होटल मेरियटमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच झण्डै दुई घण्टा वार्ता भयो । वार्तामा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूसमेत भएपछि उनीहरु एक्ला एक्लै बसे ।
शुरुमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल मात्र भेट हुँदा सञ्चो बिसञ्चोको औपचारिकता भएको बताइन्छ । त्यहि क्रममा नेपालले आफूलाई भुँडी र अगाडिको भागमा जनै खटिराजस्तो पानीसरा आएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘खै खै’ भन्दै नेपालको पेट हेर्न खोजे हो ।
उनले पानीसराको औषधि बताउँदै नेपाललाई सुझाए ‘कालो तिल आफैँले चपाएर थपकथपक लगाइदिनुहोला । तिल चपाउँदा पनि आनन्द आउँछ । चपाउँदै मसिनो पार्दै त्यो लेप लगाइदिनुहोस् । त्यसरी लगाउँदा सँगसँगै पोलिरहेको पानीसरा,फोका,त्यो जीलजील गर्ने फोकाहरू समाप्त हुन्छ र बिस्तारै केही घण्टाभित्र सुक्छ ।’ जनआस्थाले समाचार लेखेको छ ।